people Nepal » सशस्त्र प्रहरी पनि सुन तस्करीमा संलग्न? सशस्त्र प्रहरी पनि सुन तस्करीमा संलग्न? – people Nepal
सशस्त्र प्रहरी पनि सुन तस्करीमा संलग्न?
Posted on August 1, 2017 by Durga Panta
काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय प्रहरीकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ । प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीका सइसहित तीनजनालाई दुई किलो सुनसहित पक्राउ गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो ।
विमानस्थलमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोमबार सशस्त्रका सइ सञ्जीव मानन्धरसहितलाई पक्राउ गरेको छ । मानन्धर विमानस्थलमै कार्यरत थिए । ।